Maraykanka oo weerar ka fuliyey wadanka Afghanstan | Xaysimo
Home War Maraykanka oo weerar ka fuliyey wadanka Afghanstan
Maraykanka oo weerar ka fuliyey wadanka Afghanstan
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee nooca Drones-ka ayaa weerar dhinaca cirka ah ka fuliyey bariga Afghanistan, iyada oo lagu beegsaday kooxda Isis-K oo ah urur-goboleed ka tirsan kooxda la magacbaxday dowladda Islaamka.
Weerarkan oo ahaa mid aargoosi ah ayaa ka dhacay gobolka Nangarhar, iyada oo lagu bartilmaameedsaday gaari uu la socday sarkaal kooxda Isis-K u qaabilsanaa dhanka qorsheynta.
Wakaaladda wararka Reuters ayaa daabacday in duqeyntaas ay u dhacday sidii loo qorsheeyey, isla-markaana ay fulisay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo ka soo duushay saldhig aan la magacaabin oo uu Mareykanka ku leeyahay Bariga Dhexe.
Sidoo kale militeriga Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inay rumeysan yihiin inay khaarijiyeen sarkaalkaasi, walow aysan shaacin magaciisa dhabta ah.
Maalin ka hor ayey aheyd markii qaraxyo is xig-xigay oo ay sheegatay Daacish ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha Kabul, waxaana ku dhintay ku dhawaad 170 qof oo ay ka mid yihiin 12 askari oo ka tirsanaa ciidanka gaarka ah ee Mareykanka.
Kadib weerarkaasi Madaxweyne Joe Biden ayaa wacad ku maray inay baacsan doonaan kooxihii ka dambeeyey weerarka lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee caasimada Kabul.
Si kastaba weeraradan ayaa ku soo aadayo, xilli weli ciidamada Mareykanka ay wadaan daad-gureynta dadka ka baxsanaya Afghanistan, kadib markii ay la wareegtay Taalibaan.